ကျနော် ဆွဲဖွင့်မိသော တံခါးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျနော် ဆွဲဖွင့်မိသော တံခါးများ
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Apr 20, 2012 in Copy/Paste |5comments
ကျနော် ဆွဲဖွင့်မိသော တံခါးများ ရွှေအိမ်စည်
ဒီသတင်းတွေ ကိုကျနော်အဓိကတင်နေကျ ဖိုရမ်ကတင်မလို့ ပါဘဲ…သို့ သော်..လူတိုင်းလည်း..စိတ်တခါးလေးတွေ ဖွင့်စေချင်လို့ ပင်မစာမျက်နှာကဘဲတင်လိုက်ပါတယ်။
အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်းများ ခင်ဗျားမောင်မောင်လှကြိုင်ပို့ တာလေးမျှဝေလိုက်ပါတယ်။
လျင်လှ မြင်တတ် စောကြောတတ် ပြောတတ်လှချေလား ကိုနေဇော်နိုင်ရေ့
မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်သလား၊ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကို တကယ်ချစ်သလား
ခွဲတဲ့နေရာမှာ ထိပ်ခေါင်တင် အဓိပတိပါပဲဗျာ
သမိုင်းဆိုတာ လိမ်ညာ ဖျောက်ဖျက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ မန္တလေးပါတီဝင်အသစ်တွေမှာ – တဖက်လူ သတင်းပေး များ ၀င် လာလို့စီစစ်နေပါတယ်လို့မန္တလေး NLD ကအင်တာဗြူးသတင်းတခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ၊ နောက် သတင်း သမားအချင်းချင်း က ပဲ မခံမရပ်နိုင်လို့Facebook ကနေ အန်တီအိမ်ထဲ ကို သတင်းယူသွားခါနီးမှာ SB တွေဆီကနေ အသံဖမ်းစက်ယူ သွားပေးတာ..ပြန်အပ်ပေးတာတွေ မြင်တွေ့နေရလို့ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတဲ့အပြင် သတင်းသမားတွေ နံမည်ပျက် မှာစိုးရိမ် မိပါတယ်လို့ရေးကြတာတွေ ဖတ်လိုက်မိပါတယ် ။
နောက်ထပ် ဦးအောင်မြင့်တို့ အချိန်းအချက်ပြုလုပ်ကြတဲ့နေရာကတော့ ဇီဝတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရှိ ရွေဂုံတိုင် ကားမှတ်တိုင် အနီးမှာ ရှိတဲ့ လမ်းကြား တခုမှာပဲ ဖြစ်ပါသည် ။၎င်း လမ်းကြားလေးထဲမှာ ညနေ ၅ နာရီ ၀န်းကျင်မှာ ဆိုလျှင် အပေါ့သွားမလိုလို ဘာလိုလိုနှင့် ယောင် လည်လည် လုပ်နေတတ်ပါသည် ။ ထို့ နောက်ချိန်းဆို ထားသူ နဲ့ပေးစရာရှိတာပေးပြီးသည်နှင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားတော့သည် ။ထိုသို့ ဦးအောင်မြင့်လုပ်နေသည် မှာ အချိန်ကာလ အတော်ကြာ မြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ NLD ရုံးမှလည်း ဦးအောင်မြင့်ကို အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်သော်လည်း ရုံးထဲသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို တားမြစ်ထားခဲ့ပါသည် ။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ မလွတ်မြောက်မီ အချိန်တွင် ပြန်လည် အတင့်ရဲလာကာ NLD ရုံးချုပ် မှ ကျင်းပသော အခန်းအနားပွဲများ ၊ ပြည်နယ်တိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် ရုံးတွင်းသို့ဝင်ရောက် သတင်းယူခြင်းများပင် ပြန်လည်ပြုလုပ်လာခဲ့သည်မှာ ယခုအချိန်ထိဖြစ်သည်ဟု ပါတီဝင်တဦးမှပြောပြချက်အရ သ်ိရပါသည် ။
ထပ်မံပြီး မိမိတို့ MyanmarMedia အဖွဲ့သားများမှ သိရှိထားသော NLD ရုံး(အတွင်း၊အပြင်)မှ သတင်း ပေး လုပ်ကိုင်နေကြများကို မကြာမီတွင် ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။တင်ပြရာတွင် သတင်းပေးလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ကြောင်းကို မှားယွင်းစွာဖော်ပြမိပါက ဖော်ပြခံရသူမှာ ဂုဏ်သိက္ခာ ပိုင်းဆိုင်ရာ များစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အတွက် သေချာစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး သတင်းပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ကြောင်း အချက်အလက် ခိုင်မာသေချာသည့်သူများကိုသာ တင်ပြသွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ မိမိတို့အနေဖြင့် ဖော်ကောင် လုပ်ကြရခြင်းမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ သူ တပါးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ကိုပျက်စီး စေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမျိုးလုံးဝ မရှိပါ ။ သူတပါးခန္ဓာ ကိုယ်မှဖြစ်စေ ၊ မိမိခန္ဒာကိုယ်မှဖြစ်စေ ပုပ်ပွရိရွဲပြီး လှိုက်စားနေသော အသားပုပ်များကို ဖယ်ထုတ် နိုင်စေရန်ကြိုးစားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါရစေဗျာ..။
နောက်ဆုံး ဦးရွှေမန်းက ကြံ့ဖွံ့ ပါတီဝင်များ အဂတိ လိုက်စားမှု သက်သေ ထင်ရှားတွေ့ခဲ့ရင် အရေးယူတော့မယ်
မှန်ခဲ့ရင် အကောင်းဆုံး နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် အဖြစ်မှတ်ယူပါမည်။
ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုအရေးယူမှာလဲ ?
ဖြစ်ကော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ?
ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါးလွန်းမယ် ထင်တယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက.. စစ်တပ်အခြေခံထားသမို့.. တော်ရုံကွဲပြဲဖို့.. ခက်ပါတယ်..။
NLD ဒီလိုလမ်းကိုမလျှောက်ဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်..
တို့ဗမာအစည်းအရုံးဘွဲ့ မဟာကဗျာလေးချိုးကြီး	ဒဂုန်တာရာ
(အမယ်မင်း) ဇေယျတု ၊ဇေယျတုရယ်လို့
မြေထု လေထု ရေထု ၊ပြေအမှုအခြေပြုရာတွင်
တို့ကာ တို့ကာ ရွှေသမင်
(အိုကွယ်) ကမ္ဘာတစ်ခွင် ၊မြန်မာထင်စေဖို့
သြော် … ဥက္ကဌ ဆရာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရယ်က
အညာတစ်ခွင် ကမ္ဘာတစ်ခွင် ထိုထိုစိုင်းပါလို့
ဧ၇ာဝတီ ယန်စီ ဗော်လဂါငဲ့ပြင်
ဂင်္ဂါယမုန်နာ ဒီပါလင်္ကာနဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေး သံတမန်တော် အဖြစ်
စုန်ကာ ဆန်ကာ ရေယာဉ် လေယာဉ် စီးပါလို့
တစ်ချက်ဆို တစ်ချက်မှ မညည်းဘဲ
လှေတစ်တန် လှည်းတစ်တန် သင်္ဘောအတန်တန်နဲ့
ဟောကာ ပြောကာ သောကာ စောဒနာငဲ့ပြင်
လွမ်းစရာ တမ်းစရာ မှန်းစရာ ငြိမ်းစရာပေပ
ကဗျာဓိုရ် ပရော်ဖက်ဆာ ဆရာလွန်းဟာဖြင့်
ကိုလိုနီပညာရှင် အသိုင်းအ၀န်းကို တွန်းလှန်ပိုင်းစေဖို့
ရည်ညွန်းကာ သရော်ကာ လှောင်ကာ နှိုင်းတာက
သူ့ကိုယ်သူ ခေါ်စရာ မစ္စတာမှိုင်းပါတဲ့လေ
ရော် … ထိုအခါ တို့ဗမာလူငယ်တစ်စုရယ်က
အမည်တွင်ကာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရယ် ဟု
၀ိုင်းရံ ၊ သိုင်းပျံ ၊စိုင်းဟန်နဲ့
ညီညွတ်အား ဒီမိုကရေစီအား ၊တော်လှန်အား
အလ်ို … သမိုင်းကို စစ်လိုက်ရင်ဖြင့်
အင်စရာ မင်စရာ ကြင်စရာငဲ့ပြင်
ရဲကြ ကြဲကြ သဲကြ မဲကြတာလဲရှိ
ခွဲကြ ချဲကြ ဆွဲကြ လွဲကြ ရှိပါသဗျ
သြော် .. .အဖွဲ့အစည်း သဘာဝပေပနော
သြော် .. . ပြောမည့်သာပြောရ တကယ်ကျပြန်တော့လဲ
တို့ဗမာနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့ ရဲ့
စည်းလုံးကြ ညီညွတ်ကြတဲ့ အင်အားပါပဲ
အလုပ်သမား ၊ လယ်သမား ၊လူငယ်ကျောင်းသားတို့
မီးတုတ် မီးတုတ် ရှို့ ရှို့
သူပုန်သူပုန် ထ ထ
တိုင်းခွင်လုံး လွတ်လပ်ဖို့ အရေး
‘ တစ်ကောင်းအဘိရာဇာ ၊တို့ဗမာ သာကီမျိုးဟာမို့
မညှိုးဂုဏ်တေဇာ ၊ယိုးဒယားနဲ့ ကုလား ကိုပါ
တိုက်ခိုက်ကာ အောင်ခဲ့တာ ‘ ဟု အစချီသော
မိုးသက်ကယ် ၀ါးကဲလား အထိသာပ
ပူတာအိုမှ ကော့သောင်း အဆုံး
ဒါတို့ ပြေ ၊ ဒါတို့မြေ ၊ ဒါ .. ငါတို့ပြေ
အမိဆိုတာ တို့ဗမာမာတာ တစ်မိတည်းရယ်က
ပေါက်ဖွားလာ သား တပည့်တွေချည်းပါပဲ
ဆိုရှယ်လစ်နဲ့ ၊ ကွန်မြုနစ်တဲ့ဗျာ
(ဆရာကြီး ကြိုက်တဲ့ ) ဒေါင်းတံဆိပ်
ဒေါင်းနိမိတ် ဒေါင်းအမြိတ်တွေ တဝေေ၀ပ
ရွှေဒေါင်းတောင် ကလောင်နှင့် သ, လိုက်ချင်ပါငဲ့
ကဗျာ့ဥာဏ် ဆရာ့ဟန် မမီနိုင်ဘု
ကသီကရီ ၊ မပြီတပြီ မညီတညီနဲ့ရယ်ဖြင့်
သည်ကဗျာ ဒီတစ်ခါ ရယ်စရာ မှတ်ချင်မှတ်ကြပေရော့
သြော် .. မာလာဝေစည် စိမ်းစေလှစေမွေး
သာယာရွှေပြည် ငြိမ်းစေ မြစေအေး။ ။
ဦးသိန်းစိန် အရေးယူဖို့ ခက်နေတဲ့ကိစ္စ ကို ဦးရွှေမန်း က တာဝန်ယူမယ် ဆိုတာ သိရလို့ အမြန်ဆုံး ဖြစ်လာပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ် ဗျား ။
အဘဥအောင်သောင်းဒို့ဂို သိပ်မပြောဂျပါနဲ့ဗျာ..။ သူဒို့ဂ လူဂေါင်းဂျီးဒွေဘာ..။